काठमाडौं : अमेरिकाले नेपाललाई भ्रमण गर्न नहुने मुलुकको सुचीमा राखेको छ । अमेरिकको विदेश मन्त्रालयले नेपालमा कोरोना महामारी अत्याधिक बढिरहेको भन्दै नेपाल
भ्रमण गर्न नहुने मुलुकमा राखेको हो । यो सँगै अमेरिकाले नेपालमा भएका सबै आफ्ना नागरिकहरु लालई लाने जनाएको छ । उसले विमान चाट’र्ड गरेर ललैजाने तयारी पनि गरेको छ ।
जसका लागि नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले स्वदेश फर्कन चाहने अमेरिकी हरुले नामावली द’र्ता गराउने तयारी पनि गरेको छ । तर आफ्ना नागरिक लैजान भन्दै अमेरिकी दूता’वासले गरेको प्रस्तावमा नेपाल सरकारले कुनै प्रतिकृया नदिएको जनाएको छ ।
कृष्ण थापालाई राजमोले गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलको नेताबाट हटायो !
कास्की : राष्ट्रिय जनमो’र्चाले कृष्ण थापालाई गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलको नेताबाट हटाएको छ । बुधबार (आज) बसेको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले थापालाई तत्काल संसदीय दलको नेताबाट हटाउने निर्णय गरेको हो ।
महासचिव मनोज भट्टले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै भनेका छन्, ‘माओवादी केन्द्र एवं जसपासहित मिलेर सरकार निर्माण गर्ने कार्यलाई समर्थन गर्ने गरी भएको निर्णयका विब’रुद्ध कार्य गरी दलको निर्णय विपरीत काम का’र्यबाहीमा संलग्न रहनु भएकोले
आज मिति २०७२ साल वैशाख २९ गते माननीय कृष्ण थापालाई पार्टीको निर्देशन विपरित कार्य गरेकोले तपाईंलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाइ अन्य आवस्यक कार’वाही किन नगर्ने ?
सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गरिएको थियो ।’जानकारी अनुसार केही समयभित्र प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र बुझाइँदैछ । पार्टीले सोधेको स्प’ष्टीकरणको चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको कारण दलको नेताबाट थापालाई हटाइएको बताइएको छ ।
२०७८ बैशाख २९, बुधबार १६:१२ गते 1 Minute 1015 Views